Rehefa tian'ny namanao akaiky indrindra ianao hanao vaksiny ...
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Rehefa tian'ny namanao akaiky indrindra ianao hanao vaksiny…
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Rehefa tian'ny namanao akaiky indrindra ianao hanao vaksiny…
Ny amerikanina dia manary namana amin'ny vaksinin'ny COVID-19
Nasehon'ny fitsapan-kevitra fa 97% amin'ireo olona vita vaksiny no mihevitra ny sakaizany taloha ho "anti-vaxxers feno" ary nilaza izy ireo fa tsy ho azon'izy ireo an-tsaina mihitsy ny maha-zava-dehibe ny fakana sary.
14% ny Amerikanina vita vaksiny dia manana finamanana miaraka amin'ireo olona tsy nety nanao vaksiny.
Ny 81% n'ireo mpandalina ny fanadihadiana Demokraty dia nilaza fa vita vaksiny tanteraka.
64% amin'ireo namaly ny fanadihadiana tamin'ny Repoblika dia nilaza fa nanao vaksiny tanteraka.
Ny valim-panadihadiana vaovao manerana ny firenena, natao tamin'ny voalohan'ny volana septambra, dia nanambara fa ny 16% amin'ireo mponina amerikana nandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia namarana finamanana telo farafahakeliny tao anatin'ny herintaona sy tapany. Manodidina ny 14% ny Amerikanina vita vaksiny no nilaza fa manana fifandraisana akaiky amin'ny namana izay nisafidy ny tsy hanao vaksiny fanoherana ny COVID-19.
Ny amerikanina dia nanary ny sakaizany tamin'ny fiainany nandritra ny krizy virus coronavirus, ary ho an'ireo izay nisafidy ny ho jabbed dia matetika ny toeran'ny namana amin'ny vaksiny COVID-19 no matetika nanapotika ny fifandraisana.
Raha ny marina, ny valin-kafatra namaly dia efa in-efatra heny noho ireo izay tsy mikasa ny hahazo ny jabs - 66% ka hatramin'ny 17% - dia nanapaka ny fisakaizana nandritra ny areti-mandringana. Nasehon'ny fitsapan-kevitra fa 97% amin'ireo olona vita vaksiny no mihevitra ny sakaizany taloha ho "anti-vaxxers feno" ary nilaza izy ireo fa tsy ho azon'izy ireo an-tsaina mihitsy ny maha-zava-dehibe ny fakana sary.
Vaksiny COVID-19 dia iray amin'ireo olana mampisara-bazana indrindra amin'ny familiana baraingo eo amin'ny Amerikanina. Ilay 14% nanonona ny jabs ho antony nampitsaharana ny finamanana raha ampitahaina amin'ny 16% izay nanome tsiny ny tsy fitoviana ara-politika sy 15% izay ny sakaizany taloha dia niaraka tamina sakaizany taloha. Antony hafa koa ny fahitana ny sakaizany dia mpandainga (7%) ary ny fananana namana dia mamorona tantara momba azy ireo (12%).
Toa nitahy ny hevitra fanariana ireo namana izay tsy nety nanao vaksiny i Hollywood. Ilay mpilalao sarimihetsika Jennifer Aniston - mampihomehy, kintana amin'ilay fahitalavitra 'Friends' - tamin'ny volana lasa teo tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny magazine InStyle fa namarana ny fifandraisany amina olona izay tsy nety nanao jabbed na nisafidy ny tsy hilaza aminy ny momba ny fidiran'izy ireo. “Tena mahamenatra izany,” hoy izy. “Very olona vitsivitsy fotsiny aho tamin'ny fanaoko isan-kerinandro.”
Mpilalao sarimihetsika Jennifer Aniston
Ny tahan'ny vitriol vaksinina dia nitombo tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Vao tsy ela akory izay ilay superstar amin'ny radio Howard Stern dia nanapoaka “ireo ankolafy s ** rehetra eto amintsika izay tsy hanao vaksiny” ary nilaza fa izay tsy mahazo jabs dia tokony holavina ny fandriana hopitaly raha marary izy ireo. "Mijanona ao an-trano, maty any miaraka amin'ny COVID anao," hoy izy.
Nilaza i New fa ny 81% n'ireo mpamaly ny fanadihadiana Demokraty dia vita vaksiny feno, raha ampitahaina amin'ny 64% an'ny Repoblikana ary 69% an'ny tsy miankina. Manodidina ny 57% ny Repoblikana ary ny 41% an'ny Demokraty no nilaza fa ny fiaraha-monina dia "mitsikera loatra" an'ireo Amerikana tsy vita volo.
Mihena ny fandeferana amin'ny fizakan-tena amin'ny vaksiny ao amin'ny USA, araka ny baikon'ny filoha Joe Biden tamin'ny herinandro lasa teo ny orinasa rehetra misy mpiasa 100 na mihoatra hanery ny mpiasan'izy ireo hahazo ny tifitra. “Nanam-paharetana izahay, saingy mihalefaka ny faharetanay, ary ny fandavanareo dia nandaniam-bola anay rehetra,” hoy i Biden momba ny Amerikanina tsy vita volo.